Utshintsho lwemozulu luchaphazela ukhetho lwendalo kunye nokuvela kwezinto eziphilayo | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Utshintsho lwemozulu luchaphazela ukhetho lwendalo kunye nokuvela kwezinto eziphilayo
IsiJamani sasePortillo | | I-ecology, Yendalo
Kwi-ecosystems yethu, zonke izinto eziphilayo zilandela inkqubo ebizwa ngokuba kukhetho lwendalo. Le nkqubo yiyo ethatha isigqibo sokuba zeziphi izakhi zofuzo eziluncedo kakhulu ekusindisweni kwezinto eziphilayo kwaye zibangele "uphuculo" kulungelelwaniso.
Utshintsho lwemozulu kunye neziphumo zalo ezonakalisayo kwihlabathi liphela, inokuchaphazela le nkqubo yokhetho lwendalo, kubangela ukuba iindlela ezahlukeneyo zokuzivelela kwezinto eziphilayo ziguqulwe.
1 Yintoni ukhetho lwendalo?
2 Ukhetho lwendalo kunye notshintsho lwemozulu
3 Ukuhla kwemvula kunye nokunyuka kwembalela
4 Utshintsho kwindalo
Yintoni ukhetho lwendalo?
Ukuqonda ngokupheleleyo ukuba utshintsho lwemozulu lukuchaphazela njani ukukhetha kwendalo, kuya kufuneka sazi ukuba imalunga nantoni. Ukhetho lwendalo yinkqubo apho uhlobo luziqhelanisa nemeko yalo. Utshintsho kwindaleko lukhokelwa xa abantu abaneempawu ezithile benokuphakama okuphezulu okanye inqanaba lokuzala kwakhona kunabanye abantu kubemi kwaye badlulise ezi mpawu zemfuza kubantwana babo.
I-genotype liqela lezinto eziphilayo ezabelana ngeseti ethile yemfuza. Ke ngoko, ukubeka ngokulula, ukhetho lwendalo ngumahluko ohambelana nokusinda kunye nokuzala phakathi kweendidi ezahlukeneyo zohlobo. Le yinto esingayibiza ngokuba yimpumelelo yokuzala.
Ukhetho lwendalo kunye notshintsho lwemozulu
Uphando lupapashwe kwiphephancwadi inzululwazi epapashwe kwiveki ephelileyo ithi utshintsho lwehlabathi kule nkqubo yokhetho lwendalo lukhokelwa yimvula ngakumbi kunamaqondo obushushu. Kuba utshintsho lwemozulu luguqula imeko yemvula kwinqanaba lehlabathi, inokuchaphazela le nkqubo yokhetho lwendalo.
Nangona iziphumo zemozulu zotshintsho lwemozulu zichazwe kakuhle, iziphumo zemozulu kwinkqubo yendaleko ekhokela ulungelelwaniso ayaziwa ”, utsho umbhalo opapashwe kwiNzululwazi.
Ngenxa yokuba lo ngumsebenzi onzima, izazinzulu kuye kwafuneka zisebenzise isiseko sedatha esikhulu esisemva kwezifundo ezenziweyo kumashumi eminyaka adlulileyo. Kule datha zizifundo ezenziwa kubemi abahlukeneyo bezilwanyana, izityalo kunye nezinye izinto eziphilayo, kunye nokukwazi kwabo ukuphila nokuzala.
Ukuhla kwemvula kunye nokunyuka kwembalela
Enye yezinto ezinokuchaphazela ukhetho lwendalo lulawulo lwemvula. Ukuba ziyancipha, imbalela iyanda, kokubini ngexesha nakwisantya. Emva koko, ukwanda kwimbalela kubangela ukuba iindawo ezininzi zome kwaye zide zibe yintlango. Nangona kunjalo, kwezinye iindawo, imvula iyanda kwaye kunokubakho iimeko apho ingingqi iba yindawo enomswakama ngakumbi.
Nokuba kwenzeka ntoni, oku kuchaphazela iipatheni zokhetho lwendalo. Oko kukuthi, ukuvela kweentlobo ezahlukeneyo zezinto eziphilayo kuyachaphazeleka kuba ayitshintshanga nje imizila yemfuza, kodwa ikwanjalo ne-arhente yangaphandle (imozulu). Umahluko kwimozulu, njengokwanda kwamaqondo obushushu, ulawulo lomoya, imvula, njl. Zichaphazela uhlengahlengiso olunokuthi lube nezinto ezahlukeneyo eziphilayo ngokwenkqubo yokhetho lwendalo.
Kwi-ecosystems, kungakho utshintsho lwexesha elide apho iintlobo ezahlukeneyo zinokuba "nomda" wokuziqhelanisa nokufunda ukuphila ebusweni beemeko ezintsha. Umzekelo, Utshintsho kwimo yemvula lunokuchaphazela umthombo wokutya wezinto ezahlukeneyo. Oko kukuthi, iintlobo ezixhomekeke kukutya okuthile, ezinjengezityalo ezitya uhlaza, zinokuchaphazeleka kukuncitshiswa kwesembozo sezityalo ngenxa yokwehla kwemvula.
Yiyo loo nto ukwazi iimpembelelo zotshintsho lwemozulu kunye nokwazi ubudlelwane bayo kunye neenkqubo zokuzivelela kwezinto zokhetho lwendalo kubaluleke kakhulu kulwazi ngenguqu ekusebenzeni kwendalo. Kuba kwixesha elifutshane ukonyuka kwemvula enzima kulindeleke oku kungakhokelela kutshintsho olukhulu kwiipateni zokukhetha.
Njengoko benditshilo ngaphambili, kuxhomekeke kwisantya esenzeka ngaso utshintsho kwindalo, iintlobo zinokuthi okanye zingahambelani neemeko ezintsha. Nangona kunjalo, into engenakukhanyelwa kukuba utshintsho lwemozulu lunamandla ngokwaneleyo okutshintsha uhlengahlengiso lwezinto eziphilayo kwihlabathi liphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » Utshintsho lwemozulu luchaphazela ukhetho lwendalo kunye nokuvela kwezinto eziphilayo
eyakho endala haha sitsho
kukho ibhadi lingena kwi-rectum yenye, ngokuchanekileyo kumfanekiso wokuqala
Phendula kwi-haha yakho yakudala
Yintoni, yenziwe njani kwaye isetyenziselwa ntoni amandla elanga e-photovoltaic
Oohola bendlela kunye nophahla lwelanga